Banaadir iyo Galmudug oo barbaro ku kala baxay. “SAWIRRO” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Banaadir iyo Galmudug oo barbaro ku kala baxay. “SAWIRRO”
MUQDISHO-(SONNA)-Tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayaa galabta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, kulanka furitaankana waxaa wadda ciyaaray gobolka Banaadir iyo Dowlad Gobolka Galmudug oo ka tirsan groupka koowaad ee tartanka (Group A).
Previous articleCiidanka Itoobiya oo helay shidaal badan oo ay ka carareen TPLF.
Next articleTaliyaha Booliska Soomaaliyeed oo hambalyo u diray ciidanka Booliska